डकुमेन्ट्रीमा तान्जे गाउँको ‘हनी हन्टिङ’ (भिडियोसहित)- रोचक - कान्तिपुर समाचार
डकुमेन्ट्रीमा तान्जे गाउँको ‘हनी हन्टिङ’ (भिडियोसहित)
जेष्ठ २९, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — नेपालमा सदीयौंदेखि चलिआएका केही यस्ता लोपोन्मुख परम्परा छन् जुन निकै आश्चर्यजनक र जोखिमपूर्ण छन् । यस्तै एउटा परम्परा लमजुङको तान्जे गाउँमा प्रचलित छ जसलाई ‘हाइ क्लिफ हनी हन्टिङ’ अर्थात् भिर मौरीको मह शिकार भन्ने गरिन्छ ।
यो परम्परा करिब २०० वर्ष अघि बाउबाजेका पालादेखि सुरु हुँदै आएको भन्ने उनीहरूको भनाइ छ।
वरिपरि घनघोर जङ्गल रहेको तान्जे गाउँ पुगेर फोर एएम प्रोडक्सनको सहयोगमा नेपाल एठ वन्डरले डकुमेन्ट्री तयार गरेको छ। डकुमेन्ट्रीमा ४५ वर्षसम्म मह शिकार गरेका कृष्णबहादुर तामाङलगायतको अनुभव छ।
मह काढ्ने प्रक्रिया निकै कलात्मक पनि देखिन्छ। ‘यसमा केही सिकारीहरू मौरी भगाउन भिरको फेदबाट आगो बाल्न थाल्छन्, जसले गर्दा धुँवा को मुस्लो माथि मौरी को घार सम्म पुग्छ। अरू केही सिकारी भिरको माथि पट्टि डोरी र सिडी कस्न थाल्छन्। त्यसपछि एक जना सिकारी माथिबाट त्यो डोरी र सिंढी प्रयोग गरेर मौरीको घार भएको ठाउँ पुग्छ र मह काढ्न थाल्छ। त्यो बेला, यो काम गर्न लगभग १६ जना शिकारी र पूरै १० घण्टा समय लागेको थियो,’ डकुमेन्ट्री निर्माणमा संलग्न हेमन्त भण्डारीले आफ्नो अनुभव सुनाए।
‘भ्रमणमा शिकारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न भोज डील्स कम्पनीले खानेकुराको प्याकेजहरू पठाइदिएको थियो। हामीले ती प्याकेजहरू उनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्‍यौं, उनीहरू निकै उत्साहित देखिन्थे,’ उनकोको सम्झना छ।
सुजन निरौलाले डकुमेन्ट्री लेखेका हुन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७५ २०:४९
‘करिअर जोय’ हुँदै
काठमाडौँ — अनलाइन मिडिया स्टार्टअप कम्पनी (ओएमजी, नेपाल)ले आगामी असार १० गते ‘करिअर जोय’ कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।
एसईई र १२ कक्षा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई करिअर छनोटमा सहयोग गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको ओएमजीले जनाएको छ ।
कार्यक्रम राष्ट्रिय नाचघर, जमलमा हुनेछ ।कार्यक्रममा विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न विषय विज्ञले परामर्श दिनेछन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७५ २०:३८
२ सय ५१ केजीको लड्डु
दुधालु गोरु !
बाँदर नियन्त्रण गर्न ३० लाख !
पुरोहितलाई आचारसंहिता जारी